साम्राज्ञीको प्रेमी बन्दै जितु नेपाल मुन्द्रे ! – Taja Khawar
साम्राज्ञीको प्रेमी बन्दै जितु नेपाल मुन्द्रे !
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २५, २०७८ समय: २:३५:३२
काठमाडौं । नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र जितु नेपाल पहिलो पटक चलचत्रिमा प्रेमी–प्रेमिकाको रुपमा देखिने भएका छन् । उनीहरु दुवैले उक्त चलचित्रका लागि साइन समेत गरिसकेका छन् ।
लण्डनमा बसोबास गर्दै आएका कपिल रिजालले निर्देशन गर्न लागेकाे उक्त चलचलित्रकाे छायांकन भदौकाे १५ गतेबाट सुरू हुने बताइएकाे छ ।
चलचित्रका लागि जीतु र साम्राज्ञी दुवैले लिखित सम्झाैता गरिसकेकाे निर्माण पक्षले जनाएकाे छ । जितुसँग स्क्रिन सेयर गर्न पाउँदा साम्राज्ञी पनि खुशी छिन् । चलचित्रको कथा निक्कै नै फरक रहेकाे पनि बुझिएकाे छ । यो चलचित्रका लागि साम्राज्ञीले महंगो पारिश्रमिक बुझेकी छिन् ।
निर्माण पक्षका अनुसार चलचित्रको छायांकन काठमाडौं र पोखराको विभिन्न स्थानमा हुनेछ । यसअघिकाे चलचित्र ‘ड्रिम्स’मा कपिलले नै लगानी गरेका थिए ।
सवारी लाइसेन्स निकाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने आयो सोच्दै नसोचेको खुसीको खबर
By admin -August 8, 20210253
आयो सोच्दै नसोचेको खुसीको खबर ! यातायात व्यवस्था विभागले मोटरसाइकल तथा स्कुटरको लाइसेन्सको लिखित परीक्षाका लागि प्रश्नहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
एउटा प्रश्नको पाँच अङ्क दिइने र उत्तीर्ण हुनका लागि ८० अङ्क अर्थात कम्तीमा १६ वटा प्रश्नको सही जवाफ दिनुपर्ने विभागले जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाले एउटा सानो गल्तीका कारण फेल हुने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ । घुमाउरो आठमा एक पटकसम्म रेखा छोएमा वा एक पटकसम्म भुइँमा खुट्टा टेकेमा १० अङ्क घट्ने विभागले जनाएको छ ।
यस्तै नयाँ व्यवस्था अनुसार ट्रायल दिँदा परीक्षार्थीले आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न समेत पाउनेछन् ।
याे पनि, कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बोर्ड बैठकले कोरोना महामारीको कारण परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको भन्दै स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डले साउन ३१ गतेदेखि होम सेन्टरमै परीक्षाको तयारी गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रसमक्ष परीक्षा रोक्न सिफारिस गरेको थियो । महामारीको बढ्दो रुप र माथिल्ला निकायको निर्देशन अनुसार परीक्षा स्थगित गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
अब को- रोना महामारीको अवस्था हेरेर सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव र निर्देशन अनुसार अर्को मितिमा परीक्षा हुने शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो । परीक्षा हुनुभन्दा कम्तिमा १५ दिनअघि सूचना निकालिने सचिव थपलियाले बताउनुभयो ।
Last Updated on: August 9th, 2021 at 2:35 am